admin – Grab Love Story
by admin May 19, 2022 May 19, 2022 0
(ရေး – လမင်းကြီး)နောက်ဆက်တွဲ (ခ)အခုမှပဲကျနော်တို့ သားအမိ/လင်မယား ၂ယောက်လုံးပြုံးနိုင်တော့တယ်။ကျနော်…မေမေ-မယားလေး သဲဆုကိုပြုံးပြီးကြည့်လိုက်ပြီး မေမေ့ရဲ့လက်ခုံနုနုလေးကိုဖွဖွအုပ်ပြီးဆုပ်ကိုင်လိုက်တော့သဲဆိုတဲ့မေမေကလည်းရှက်ပြုံးလေးနဲ့ပြန်ကြည့်လာတယ်၊ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံးက်ို အကဲခတ်ကြည့်နေတဲ့ ဖွားဖွားက မဲ့ပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးပြီး ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့၊ပြီးတော့မှတစ်ကိုယ်ထဲပြောနေသလိုနဲ့….“ကြုံ ကြုံဘူးပေါင်တော၊် အမေနဲ့သားအရင်းချင်း ချစ်ကြကြိုက်ကြ၊ ပြန်ယူကြ၊ ဗိုက်ကြီးကြ၊ ကလေးမွေးကြနဲ့၊အေးလေ ဖိတ်ခြင်းဖိတ် ကိုယ့်အိတ်ထဲဖိတ်တော့လည်းကောင်းသားပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှသွားအနှောင့်အယှက်ပေးနေတာမှ မဟုတ်တာ…”ဖွားဖွား မြည်တွန်နေတာကြည့်ပြီး အန်တီမြနဲ့ …
အင်းဆက်ဇာတ်လမ်းပါကျနော့် နာမယ် သက်လွင်ဦးပါကျနော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးက ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာပါ။ကျနော် အဝေးသင်တက်နေတဲ့အချိန် အားအားယားယား သင်တန်းတွေချည်း ရှောက်တက်ဖြစ်ပါတယ်၊သင်တန်းတွေတက်ရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါင်းစုံရ အတွေ့အကြုံတွေလည်း ပေါင်းစုံရတော့တာပါပဲ။သူငယ်ချင်းတွေ သင်ပေးရင်းနဲ့ အတတ်ကောင်းတစ်ခု တတ်လာတာကတော့ ဆေးချတာပဲ တော်တော်များများတော့ လုပ်ဖူးပေမယ့် အကြိုက်ဆုံးကတော့ အသီးပဲဒီကောင်က ဆွဲပြီးသွားရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကို မျောနေတော့တာ …
ကျမ အသက် ၂၀ ရောက်တော့ မောင်လေးက ၁၈ နှစ်၊ အဖေက အသက် ၄၀ စွန်းစွန်းပဲရှိသေးတယ်၊ ကျမမှတ်မိသလောက်ဆို အမေက ကျမအသက် ၁၄ နှစ်လောက်မှာ ရောဂါတစ်ခုနဲ့ ဆုံးသွားတော့ ကျမတို့ မောင်နှမတွေ အဖေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ဝင်ပြီး အမေအတွက် ငိုကြွေးခဲ့ကြဘူးတာပေါ့၊ အမေဆုံးလို့ …
အူး ရှီးသေအောင် သတ်နေတာလား အောင်အဟင်း… အား… ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ်…. ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ”တိတ်ဆိတ်သော ညနှင့် အခန်းငယ်လေးထဲတွင် ရမ္မက် သံတို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံနေပေသည်။ ကိုအောင်တစ်ယောက် သူမိန်းမ အင်ကြင်းကို ကုတင်ပေါ်တွင် ပေါင်နှစ်ချောင်းဖြဲပြီး အားရပါးရနှင့်ကို စိတ်လိုလက်ရ မှုတ်ပေးနေပေသည်။ လိင်စိတ်ကြီးသူများပီပီ အရွယ်မှာလည်း နှစ်ဆယ်ငါးပတ်ဝန်းကျင် …
by admin May 18, 2022 May 18, 2022 0
အင်းပါ မောင်ရယ် ဖိုးဇော်နဲ့ကိစ္စ ပြောပြပါ့မယ် ဒါပေမယ့် သင်းသင်းအပေါ် စိတ်မကွက်ရဘူးနော် ” ” အော် မောင်မကျေနပ်ရင် အဲဒီကတည်းက ဖိုးဇော်ကို ပြသနာ ရှာမှာပေါ့ ” ” အင်းပါ မောင်ရယ် ” ” မောင် ကိုယ်တိုင်လည်း မိန်းမကို တခြားတစ်ယောက်နဲ့ …
သော်တာအိမ်ထဲကနေထွက်လာပြီး သူမချစ်သူမိုးဟိန်းရှိရာကားလေးဆီသို့ ခပ်သွက်သွက်လေးလှမ်းလာနေသည်။ သော်တာ့အရပ်က သာမန်မိန်းကလေးတွေထက်မြင့်သည် နက်မှောင်နေသည့်ဆံနွယ်တွေကလည်း ခါးလယ်လောက်ထိရှည်ကျနေသည်။ ယခုလည်း သူမဆံပင်လေးတွေကိုစုပြီးခပ်မြင့်မြင့်စည်းနှောင်ထားသည်။ မိုးဟိန်း သူ့ချစ်သူသော်တာရဲ့ တင်းရင်းဆူဖြိုးပြီး အချိုးတကျဖြစ်နေတဲ့ သော်တာရဲ့ ရင်တွေတင်တွေကိုအရမ်းသဘောကျသည် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ သော်တာ့လောက်လှတဲ့မိန်းကလေးမတွေ့ခဲ့ဖူးဟုပင်ထင်နေသည်။ သော်တာကားတံခါးလေးဖွင့်ပြီးဝင်ထိုင်လိုက်တော့ သင်းပျံ့နေတဲ့ရေမွှေးနံ့လေးက ဃဏာရုံကိုဝင်ရောက်ကျီစယ်သွားသည်။ “ဟား ကို့အချစ်လေးကြည့်ရတာ ဒီနေ့ထူးဆန်းနေသလိုပဲ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဘာတွေများရှိနေလို့ပါလိမ့်” “ဟုတ်တယ်ကိုရေ …
ဆရာမမြသီတာ…. ရုပ်ရည်လေးက တော်တော်လှသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တောင့်တင်းအချိုးကျ၍ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း ကြော့ရှင်းလှပသူဖြစ်ကာ အိုးလည်း တော်တော်တောင့်တာမို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ယောက်ျားသားတို့၏ အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရသည့် မိန်းမချောတစ်ဦးပင်ဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး လင်ရှိမယားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ သူမယောက်ျားမှာ နိုင်ငံခြားပင်လယ်ကူး သဘောင်္သားတစ်ယောက်ဟု သိရသည်။ သူမမိဘတွေကကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပြီး မိခင်ဖက်မှဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် အဒေါ်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်နှင့်အတူ …
သူမမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် သွေးသားဆူဖြိုးတက်ကြွချိန်၌ လင်ဖြစ်သူ၏ စွန့်ခွာသွားမှုကြောင့် လောကစည်းစိမ်ကို ကောင်းစွာ မခံစားရရှာပေ။ သည့်အတွက်ကြောင့် အခြားယောက်ျားသားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းလည်းမရှိခဲ့။ အန္တရာယ်ကင်းသော၊ လုံခြုံသော စိတ်အာသာဖြေနည်းမျိုးနှင့်သာ ဖင်ကို လီးနဲ့အထောက်ခံ အတေ့ခံကာ စိတ်ဖြေရာရှာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ သူမ၏ စိတ်မှာ နားလည်ရခက်လေသည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ တင်ယုနွယ်မှာ အပြန်ခက်ခဲ ကားရှားမှုကြောင့် …
ရိုး လိုက် တဲ့ အ ကို ရယ်”
အဖုံးဖွင့်ထားသော လေးထောင့်သံပုံး၏ အဝတွင် သစ်သားတုတ် ကန့်လန့်ခံကာ ချိတ်ဖြင့် ချိတ်..တံပိုးဖြင့် ထမ်းလာခဲ့သော ရေအပြည့်ပါသည့် သံပုံးနှစ်ပုံးကို ရင်မောင်သည် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသာထိန်းပြီး ဒူးနှစ်ဖက်ကွေးကာ မြေပေါ်ကို ချလိုက်၏ ။ ပြီးတော့ ပုံးနှစ်ပုံးတွင် ချိတ်ထားတဲ့ ချိတ်နှစ်ချိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး သူ၏ ပုခုံးပေါ်မှ …
ခင်မာ” သိုက်မောင်းရဲ့ခေါ်သံကြောင့်ခင်မာမီးဖိုထဲကအပြေးထွက်လာခဲ့သည်။ဧည့်ခန်းထဲတွင်တော့သိုက်မောင်းကဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်နေပြီးစစ်ကားတကားကိုကြည့်နေသည်။“ရှင် ဘဘကြီး သမီးကိုဘာခိုင်းမလို့ပါလဲ” ခင်မာ သိုက်မောင်းဘေးတွင်လက်နှစ်ဖက်ကိုယှက်ပြီးမေးလိုက်သည်။အသက်၆၀ရှိသော်လည်းတောင့်တင်းသောကိုယ်ကာယနှင့်အရွယ်တင်မှုကြောင့် ဦးသိုက်မောင်းကိုခင်မာစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေသည်။သူ့အနားကပ်ရသည်မှာ ရွာကအဘိုးအရွယ်တွေနားနေရသည်နှင့်တော့မတူတာအမှန်ပဲ။ အို မိမိက သူ့အိမ်မှာအလုပ်လာလုပ်သည်ပဲ ဘာညာဂျီးများနေလို့မှမရတာ၊ဘာတွေးနေပါလိမ့်။ဦးသိုက်မောင်း၏အကြည့်စူးစူးကခင်မာ့ ကိုယ်လုံးပေါ်ရောက်လာသည်။ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းအပေါ်သို့တက်ပြီး ခင်မာ့မျက်နှာကို ကြည့်သည်။လက်ကရီမုတ်ခလုတ်ပေါ်ကအသံကိုရှော့ကာ“သမီးခင်မာ” ဦးသိုက်မောင်း၏အသံက ချိုသော်လည်းသြဇာသံပါနေသည်။ဦးသိုက်မောင်းသည်ဒေါသဖြစ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတခု အလိုမကျလျှင်ဖြစ်စေ စကားသံကချိုသာလာသည်။ချိုသာသော်လည်းမုန်တိုင်းမတိုက်ခင် လေပြေသာသလိုသာ ရှိကြောင်းအိမ်ရှိ လူများနှင့် ရင်းနှီးသောလူများသိကြသည်။ထို့ကြောင့်အပြင်စီးပွားရေးလောကတွင် …